एकल पुरुषले पनि मासिक भत्ता पाउने ! शेयर गरौ – Enews Odisha
एकल पुरुषले पनि मासिक भत्ता पाउने ! शेयर गरौ
October 23, 2019 - by Abinash - LeaveaComment
सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका एकल पुरुषले पनि मासिक ५०० का दरले भत्ता पाउने भएका छन् । गाउँपालिकाले कार्यविधि बनाइसकेकाले यस आवको साउनदेखि नै लागू हुने गरी भत्ता वितरण गर्न लागिएको हो ।
गाउँपालिकाभित्र करीब ३५० एकल पुरुष भएको अनुमान गरिएको हँुदा नाम सङ्कलन गरेर एकिन विवरण प्राप्त भएपछि वितरण गरिने कार्यक्रम रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले बताएका छन् ।
महिला र पुरुष समान भनिँदै आएका सन्दर्भमा एकल पुरुषलाई पनि मासिक भत्ता दिन उपयुक्त ठहर गरी आन्तरिक स्रोतबाट प्रदान गर्ने गरी गाउँपालिकाको सभाले २० लाख बजेट पारित गरेको अध्यक्ष शेर्पाको भनाइ छ ।
Previous Article मनमुटाव भएपछि ओली र प्रचण्ड अलग्गीदै, आ–आफ्नै बाटो हिँड्ने !
Next Article मनकारी बालिका जसले खाजा नखाएर जम्मा गरेको पैसाले गरिन अनार्थ आश्रममा सहयोग